China World Stainless simbi kugadzirwa kufanotaura kukwira ne11% muna 2021 vagadziri uye vatengesi | Junya
Kufanotaura kwekugadzirwa kwesimbi yepasi rose kuchakwira ne11% muna 2021
Maererano neMEPS (mutengo wesimbi data uye mupi wemashoko), iyo yepasi rose crude Stainless steel production forecast yakagadziridzwa kusvika mamiriyoni 56.5 matani, muna 2021. Izvi zvinomiririra kuwedzera kwe11 muzana, gore negore. Yakakwira-kupfuura-inotarisirwa kuburitswa kwekota yekutanga muIndonesia, uye kukura kwakasimba muChina, kuri kutsigira kukwira kwakafanotaurwa.
Indonesian Stainless simbi yakabuda yakasvika inofungidzirwa 1.03 miriyoni matani mukota yekutanga yegore rino - rekodhi yakakwirira kurudzi. Vagadziri vakawedzera kutumira kuEurope panguva iyi. Antidumping mabasa akaiswa kuIndonesia inotonhora yakamonereka coils inosvika pazviteshi zveEurope, kubva muna Chivabvu 2021.
Zvigayo zvemuIndia zviri kufanotaura kuti zvichanyungudusa matani 3.9 miriyoni esimbi isina tsvina, muna 2021. Kushandiswa kwemaindasitiri kwakasimba muEurope kwakatsigira kutengesa kune hutano kwekota yekutanga. Nzvimbo yeIndia seyechipiri mugadziri mukuru wesimbi isina tsvina iri munjodzi. Vagadziri veIndonesia vari kuisa mari yakawanda muhukuru hutsva. Kubuda nezvigayo izvi kunofungidzirwa kuti kunoenderana nevevanogadzira simbi vekuIndia, gore rino.
Kugadzirwa kwegore negore muChina kunotarisirwa kukura kusvika pamamiriyoni makumi matatu nenomwe nemazana mapfumbamwe ematani. Kuedza kudzikamisa kugadzira simbi, muhafu yekutanga yegore, hakuna kushanda. Matanho ehurumende, ane chinangwa chekumisa mavhoriyamu ekunze, anotarisirwa kudzora zvinobuda mumwedzi yasara ya2021.
Nhamba dzekugadzira muSouth Korea, Japan neTaiwan dzichapfuura dzakarekodhwa muna 2020. Kusaziva kuripo, zvisinei, maererano nekukanganisa kwakazara kwemoto wemaindasitiri paYieh Corp.'s Kaohsiung plant, kuTaiwan. Kubuda kwenyika hakugone kusvika kune pre-denda tonnage, gore rino.
MuEuropean Union, kutakurwa kwesimbi isina tsvina kunotarisirwa kunyoresa kaviri-digit muzana kukura, uye kuwedzera kusvika mamiriyoni 6.95 matani, muna 2021. Nhamba mukota yechitatu inotarisirwa kuderera, nekuda kwemamiriro ekunze akaipa achangobva kuitika. Mafashamo muNorthern Europe akakonzera kukuvadzwa kwenzvimbo dzekugadzira simbi uye kukanganisa mashandiro ezvirongwa. Kupora zvine mwero kunotarisirwa, muchikamu chechina.
Zvigayo zvesimbi zveUS zvinofanirwa kurekodha kuwedzera kwegore negore kwekuwedzera kwe15 muzana, kusvika 2.46 miriyoni matani, muna 2021. Pasinei nemitengo yekushandisa simba rekudyara inodarika 80 muzana kubva pakupera kwaMay, zvigayo zvesimbi hazvikwanisi kuzadzisa zvinodiwa zvemumba zvine hutano.
Zvisinei nekukura kuri kuita kugadzirwa pasi rose, kushomeka kwesimbi isina simbi kunoshumwa mumisika mizhinji. Kushandiswa kwepasi rose-mushandisi kune hutano, nekuda kwekusimudzira hupfumi mapakeji uye maonero akanaka epashure-denda. Kudzikira kwemasheya kuri kuwedzera kushomeka kwemari. Nekuda kweizvozvo, mitengo inogona kutarisana nekuenderera mberi kwekumanikidza, munguva yepakati.
Tianjin Junya Precision Machinery Co., Ltd., yakabatanidzwa muna 2015, ikambani ine simba yekugadzira uye yekushambadzira ine hunyanzvi muStainless Steel chaiyo yekukanda zvigadzirwa nemasevhisi. Zvezvigadzirwa, isu parizvino takasarudzika mumitsara mitatu yeSimbi Chigadzirwa: a) Stainless Steel Investment Castings(zvikamu); b) Stainless Simbi Mavhavha; c) Stainless Simbi Pipe Fittings. Zvichakadaro, isu tinopawo dhizaini, R & D, OEM uye ODM masevhisi ane customized kukanda uye machining mhinduro kugutsa zviri nani zvinodiwa nevatengi.
Muna Junya, tinoona kuisa mari sebasa renguva refu rechikwata chose kwete kudyara kwevashoma. Takazvipira kugara tichishandira vatengi vedu nemhinduro dziri nani. Isu tinotarisira kumisa kushandira pamwe nevanodyidzana uye vatengi vanobva kumativi ese enyika uye kubudirira pamwe chete. Welcome kuti tibatane nesu.
Nguva yekutumira: Sep-06-2021
Safety Valve, Stainless Simbi Pipe Fittings, Investment Casting Zvikamu, Investment Casting Yakagadzirirwa Machine Chikamu, Stainless Simbi Faucet, Stainless Simbi 316 Pipe Fitting Cross,